थाईल्याण्डको लागि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ? CO COVID-3 परीक्षण लिनको लागि तयार हुनुहोस्
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार » थाईल्याण्ड ब्रेकि News न्युज » थाईल्याण्डको लागि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ? CO COVID-3 परीक्षण लिनको लागि तयार हुनुहोस्
ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • सरकारी समाचार • अतिथि सत्कार उद्योग • समाचार • पुनर्निर्माण • थाईल्याण्ड ब्रेकि News न्युज • पर्यटन • पर्यटन कुराकानी • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा रहस्य • विभिन्न समाचार
यदि तपाइँ थाईल्याण्डको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भने, तीन पटक जाँच्नको लागि तयार हुनुहोस् - पहिलो आगमनको दिन हो, दोस्रो छैठौं वा सातौं दिनमा, र तेस्रो १२ वा १ 12 दिनमा।
थाईल्याण्डका प्रधानमन्त्री जनरल प्रयुत चान-ओ-चाले खोप लिएका यात्रुहरूलाई हिजो १ जुलाई, फुकेतमा यात्रा पुनः खोले।
आगन्तुकहरूको लागि मुख्य आवश्यकता यो छ कि तिनीहरू कम COVID-19 जोखिम देशहरू वा क्षेत्रहरूबाट आउनुपर्दछ।
यात्रुहरूले सम्बन्धित प्लेटफर्मको साथ दर्ता गर्नुपर्नेछ र उनीहरूको कागजात प्रमाणिकरणका लागि बुझाउनु पर्छ।
फुकेट आज (जुलाई १) खोप लगाईएको पर्यटकहरुमा पुनः खोलियो, प्रधानमन्त्री, जनरल प्रयुत चान-ओ-चा, यसको पुनः खोल्न निरीक्षण गर्न प्रान्त आइपुगेका छन्। रोयल गजेटको वेबसाइटले भर्खर २ जुलाई, जुलाई १, २०२० देखि पायलट क्षेत्रहरूमा पर्यटन क्षेत्र खोल्न आवश्यक निर्देशन र दिशानिर्देशहरूमा २ emergency औं आपतकालीन डिक्री प्रकाशित गर्‍यो।
डिक्रीले अतिरिक्त आवश्यकताहरू र रोग नियन्त्रण उपायहरूको लागि केन्द्रित गर्दछ थाईल्याण्ड प्रवेश गर्ने यात्रीहरू। राज्यले प्रवेश गर्ने यात्रुहरूका लागि सर्तहरू, समय, व्यवस्थापन र अन्य मापदण्डहरू तोक्दा यस डिक्रीले पायलट प्रान्तहरूमा पर्यटन क्षेत्र तोक्दछ।
रोग नियन्त्रण उपायहरूको सम्बन्धमा, कोविड १ S अवस्था प्रशासन केन्द्र (सीसीएसए) फुकट स्यान्डबक्स पर्यटन योजनाको लागि दिशानिर्देश जारी गरेको छ, र ती शाही राजपत्रको वेबसाइटमा प्रकाशित भएका छन्। मुख्य आवश्यकताहरू पहिले जस्तो रहन्छन् - उल्लेखनीय, आगन्तुकहरू कमबाट आउनुपर्दछ COVID-19 जोखिम देशहरू वा क्षेत्रहरू। तिनीहरूलाई सम्बन्धित प्लेटफर्मको साथ दर्ता गर्न र प्रमाणीकरणको लागि उनीहरूको कागजातहरू सबमिट गर्न आवश्यक छ। कागजातहरू निम्नानुसार छन्:
- प्रविष्टि को प्रमाणपत्र
- मेडिकल सर्टिफिकेट जसले नकारात्मक COVID-19 संक्रमण देखाउँदछ, प्रस्थान अघि hours२ घण्टा भित्र रिभर्स ट्रान्सक्रिप्शन पोलिमरेज चेन रिएक्शन (RT-PCR) परीक्षण प्रयोग गर्दै
- स्वास्थ्य बीमा, COVID-१ covering कवर, न्यूनतम कभरेज १०,००० अमेरिकी डलर को साथ
र यदि उनीहरूको नतिजा १ days दिन पछि नकारात्मक भयो भने, तिनीहरू अन्य क्षेत्रहरूमा यात्रा गर्न सक्दछन्। यदि तिनीहरू १ 14 दिन भन्दा कममा रहन्छन् भने, उनीहरूलाई तोकिएको क्षेत्र बाहिर यात्रा गर्न अनुमति छैन। (फाइल फोटो - कोह हाइ, फुकेतको डुat्गा यात्रा)
- सुरक्षा र स्वास्थ्य प्रशासन को भुक्तानी को प्रमाण (SHA) प्लस आवास कम्तिमा १ 14 दिन को लागी। १ 14 दिन भन्दा कम समयका लागि भ्रमण गर्ने आगन्तुकहरूसँग टिकट हुनै पर्छ प्रस्थानको मिति तोक्दै
- खोपको प्रमाणपत्र १ 14 दिन भन्दा कम दिनको लागि जारी गरियो। १ 18 बर्ष भन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरू, उनीहरूका अभिभावक वा अभिभावकहरूसँग, एक मेडिकल प्रमाणपत्र हुनुपर्दछ प्रस्थान अघि hours२ घण्टा भित्र नकारात्मक COVID-19 संक्रमण देखाउँदै।
राज्यमा प्रवेश गर्ने यात्रीहरूले अध्यागमन प्रक्रिया पार गर्न, एक अनुप्रयोग वा ट्र्याकि system प्रणाली स्थापना गर्नुपर्नेछ र तीन पटक जाँच गर्नुपर्नेछ। पहिलो आगमनको दिनमा हो, दोस्रो छैटौं वा सातौं दिनमा र तेस्रो १२ औं वा १ 12 औँ दिनमा। आगन्तुकहरूले COVID-13 परीक्षणको लागत तिर्नु पर्छ। यदि तिनीहरूको नतिजा १ 19 दिन पछि नकारात्मक छ भने, तिनीहरू अन्य क्षेत्रहरूमा यात्रा गर्न सक्दछन्। यदि तिनीहरू १ 14 दिन भन्दा कममा रहन्छन् भने, उनीहरूलाई तोकिएको क्षेत्र बाहिर यात्रा गर्न अनुमति छैन।